Leenjiftoota Marshal Arts magaalota Oromiyaa adda addaa irraa dhufan Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLeenjiftoota Marshal Arts magaalota Oromiyaa adda addaa irraa dhufan
Leenjiftoota Marshal Arts magaalota Oromiyaa adda addaa irraa dhufan waliin oolle. Waan heddu irraa baradhe. Ispoortiin kun waan gaariidha. Dargaggonni leenji’in cimina qaamaa qofa osoo hin taane naamusaan cimsa. Maatiin, barsiisonnifi bulchiinsi mootummaa leenjiftoota jajjabeessuun dargaggonni hiree kanatti akka fayyadaman jajjabeessaa.
An tiyyaa dulloomeera. Oromoo galmeessisuuf waadaan gala
Humni Addaa #Ripaablikaa Gadaa Oromiyaa Commander Jawar Mohammed durfamu leenjii irra akka jiru Hoji gaggeessan Waajjirichaa #Inspector Hamza Borana beeksiisani jiru.
Barbaaddaan Lafoon, feetan fardaan nuti qophiidha jechudhaaf!! Hardhaa ESAT Elatawi Zena irratti Ajaanda gudda goone kennuf qaba.
Aadaa siyaasa Oromoo keessati aangoo siyaasa hawwuus ta’e aangoo qabachuun yeroo baay`ee akka waan badaati dhiyaata. Namni keenya baay’een nama gaarii ta’anii mullachuuf aangoo siyaasaaf qabeenya horachuu irraa of-fageessu. Waan kana hayyoota siyaasa keenyatu waggoota muraasa darban kana keessaa nuuf xaxe. Kana namni yeroo duraaf cabse MM Abiy Ahmed natti fakkaata. Wantoota inni ittiin qeeqame keessaa inni tokko aangoo barbaada kan jedhu ture.
Gaafii: Oromoon aangoo barbaadun yakka kan jedhe eenyudha ture?
Deebii: Hayyoota Oromoo ana malee Oromoon biraa aangoo qabachuu hin qabu jedhanii amananiidha.
Kana jechuun maddi rakkoo keenya baay’inaan numa jechuudha. Harrumalee namni keenya nama yaada addaa qabu ykn nama yaada isaan mormuu yoo argan aangoof maallaqa barbaaddeti jechuun akka namni qaana’u akka namni sodaatu gochuuf tataafin godhamu salphaa miti. Karaa tokkoon gaafii gurgguddaa gaafachaa karaa biraa immoo akka namni keenya aangoo siyaasa hin hawwine, akka namni keenya aangoo qabatee gaafii keenya hin deebsine gochuun kuni akka sabaati burjajja’insaa cimaa keessaa akka jiru agarsiisa.
Namni kanas kan barreessite aangoof jetteeti jedhu hin dhabamu. Ani, Birhanu M Lenjiso, dandeettif mirga aangoo siyaasaaf gahu guutuu qabadhuulle ammaaf aangoos hin qabu, aangoos hin barbaadu jechuun aadamalee miti. Bu’uuri ejjannoo kanammoo aaduma siyaasa keenyati. Saba kiyya garuu beekumsan qabuun akkasumas waan itti amanuun gargaaru irraa namni duubati nadeebsu tokkollee hin jiraatu. Amen!
#Naafxanyaa Saaxileessuun dirqama Waan taheef dafaa waliif daddabarsaa
Awaanisnii biyya itti nyaattamuu dheessee biyya jalaa dheesaniitti galee..
አንበጣ ተፈልፍሎ የመጣው ከመቀሌ ዩንቨርስቲ ነው ይሄ ሰው የመጨረሻ መሀይም ነው😂😂😂